In the section above, we provide you with the operator&#039;s manuals, technical specs and documentation of Shantui Crawler Excavators SE60. All the available information can help you to determine the model of the machine you intend to buy.Mascus online platform also gives the opportunity to buy Shantui Crawler Excavators SE60 and to find out more about the Shantui brand.
ကျွန်တော်ကတော့ Zoom30 Total Station ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် Switzerland က လာပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ AMIGOS, GEOMAX ရဲ့ လာဘ်ကောင်လေး ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်မှာ အလွန်ကောင်းမွန်းတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များစွာ ရှိပါတယ် ကျွန်တော်မှာ EDM system ပါဝင်ပါတယ် ။Distance အများကြီးတိုင်းနိူင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကို အသုံးပြု ခြင်းအားဖြင့် လူကြီးမင်းတို၏ စိတ်ကျေနပ်မူကို အပြည့်အ၀ ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အပြင် အဆင်မြင့်နည်းပညာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက် ထားသောကြောင့် ရာသီဥတုဒဏ် ကြံကြံခံနိူင်တဲ့ ကျွန်တော်ပါခင်ဗျာ ။ Distance အားဖြင့် Long range 10,000 မီတာ ၊ ပေ 33,000 တိုင်းန်ိူင်ပြီး Reflectorless, Prism မလိုပဲ 1,000m, ပေ 3,300 ခန့်အထိ တိုင်းနိူင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။ ကျွန်တော်ကို လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသောအခါ ကောင်းမွန်တဲ့ Angle Accuracy 3&quot; ထိ စွမ်းဆောင်ပေးန်ိူင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် ချစ်တဲ့ Surveyors တွေအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ အဖော်မွန်လေးပေါ့ဗျာ လူကြီးမင်း၏ တိုင်းတာချက်များကို မြင်နိူင်စေဖို့လည်း ကျွန်တော်မှာ 3.5 လက်မ အကျယ်ရှိသော Display နှစ်ဖက်ပါရှိပြီး လုပ်ဆောင်ချက်များကို Icon များဖြင့် မြင်တွေ့ရမည် On Board Software များတွင် Map View ၊ Cogo Application များနှင့် Construction Software များ၊ အသုံးပြု ရလွယ်ကူသော Function များပါရှိသောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အသုံးပြု ရာတွင် ပိုမို လွယ်ကူနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါမည့် ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ မှတ်ဥာဏ်မှာ ပ္ပိုင့် 50,000 အထိ မှတ်သားပေးနိူင်ပြီး Data များရွှေ့ပြောင်းနိူင်ရန်အတွက်လည်း USB Memory Stick နှင့် Bluetooth ကိုလည်း အသုံးပြု နိူင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။ကျွန်တော်ကို တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ Battery ဆိုရင်လည်း လုပ်ငန်းလုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ Distance Measurement များဆက်တိုက် တိုင်းတာနေမည်ဆိုရင်တောင် ကျွန်တော်ဟာ ၉ နာရီကြာ အလုပ်လုပ်နိူင်ပြီး ထောင့်တွေ တိုင်းတာမည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်ဟာ ၃၆ နာရီအထိ အလုပ်လုပ်နိူင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။ Setting ချရာတွင်လည်း ပိုမိုလွယ်ကူစွာ အသုံးပြု နိူင်ရန်အတွက် Laser Plummet ပါရှိပြီး Display ပေါ်တွင်လည်း Adjustment ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း Icon များနှင့်ပြသထားသောကြောင့် ပိုမို မြန်ဆန်စွာ Setting ချနိူင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
● The engine adopts environmental-friendly Weichai Deutz WP6G125E22 or FAW Wuxi Diesel CA6DF1D-12GAG2 engine, featuring strong power, reliable performance, and high efficiency and energy-saving. ● It’s equipped with Shantui’s single-stage single-phase three-element torque converter and fixed shaft power shift transmission for power transmission, featuring good power matching, stable motion, and more powerful operations. The split structures ease the repairs and maintenances. The speed choice of four forward gears and two reverse gears is suitable for diversified severe industrial and mining conditions and realizes faster movement. ● The optimized 3,057mm dumping height, which is the highest in the industry, guarantees the excellent loading performance and ensures the carrying of higher torsional torque, featuring extensive loading/unloading scope and high efficiency. The automatic leveling function of the bucket and the 9.5s total cycle time, which is the lowest in the industry, reduce the driver’s labor strength. ● The optimized 2,700mm wheelbase guarantees outstanding site adaptability and flexibility and the operation stability to fulfill the loading and unloading operations with ease. ● With the adoption of finite element analysis optimization and the utilization of plate structure and automatic robot welding, the structural parts of the main machine feature high resistance against load and distortion, high firmness and compactness, and good stability. ● With the 12º vertical swing design for swing frame, the loader can ensure more effective ground touch while driving on rugged roads, featuring higher adhesion and better stability and trafficability. ● The double-positioning articulated structure of proprietary technologies is adopted for the front and rear frames, featuring reliable operations and convenient maintenances. ● Multiple working devices, including timber grab, bale grab, coal bucket, side dumping bucket, and quartering hammer, are at your choice.
GeoMax ZT-20R ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Switzerland က လာပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ AMIGOS, GEOMAX ရဲ့ လာဘ်ကောင်လေး ဖြစ်ပါတယ် ။ GeoMax မှာ အလွန်ကောင်းမွန်းတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များစွာ ရှိပါတယ် GeoMax မှာ EDM system ပါဝင်ပါတယ် ။Distance အများကြီးတိုင်းနိူင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကို အသုံးပြု ခြင်းအားဖြင့် လူကြီးမင်းတို၏ စိတ်ကျေနပ်မူကို အပြည့်အ၀ ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အပြင် အဆင်မြင့်နည်းပညာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက် ထားသောကြောင့် ရာသီဥတုဒဏ် ကြံကြံခံနိူင်တဲ့ ကျွန်တော်ပါခင်ဗျာ ။
Geomax ZAL 124 Auto Level သည် မြင်ကွင်းကို Magnification 24x ဆအထိ ချဲ့နိူင်သောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ဧ။် လုပ်ငန်းများတိုင်းတာရာတွင် မြင်ကွင်းကို ပိုမို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖြင့် မြင်နိူင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Leveling Accuracy အနေဖြင့်လည်း 1 km double run ကို 2.0mm Accuracy သာရှိပါသည်။
Hand stacker is hand push &amp; hand lift stacker which provides cost-effective handling for both vehicle loading and production areas. Easy maintenance and low running costs.
ကားထဲမှာ တင်စရာ တိုလီမုတ်စ များအတွက် ကားအိတ်ကလေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ ကားပေါ် တင်စရာ မရှိမှာ ပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ထိုင်ခုံ နှစ်ခုကြား ချိတ်ကာ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားလှုပ်လို. ပစ္စည်းများ မပြုတ်ကျ နိုင်တော့ပါ။ ဈေးနှုန်း ၉ထောင် (ရှေ.နှစ်ခုံကြား အိတ်) ၁သောင်း ၂ထောင် (နောက်ခုံ အိတ်) Delivery free in Yangon မြန်မာနိုင်ငံ မြို.ကြီးများ အားလုံးကို အိမ်အရောက်ပို.ခ 3ထောင်ကျပ်ပါ။ တခြားမြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းမဆက်လိုသူများအတွက် Order form https://order.moby.asia/Order?sId=eaftak9Y83U7mNyPYdzrdA%3D%3D Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
ကားနောက်ဖေးမှာ ပစ္စည်းများ တင်ရန်အတွက် Suction Anchor လေး ဖြစ်ပါတယ်။ စေျးနှုန်း - 20000 kyats Delivery free in Yangon မှာယူလိုပါက ဆက်သွယ်ရန် 09264686461 09784419691 ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဖုန်းမဆက်ချင်ရင် Order form ဖြည့်ပြီးလည်း တင်နိုင်ပြီနော် https://order.moby.asia/Order?sId=eaftak9Y83U7mNyPYdzrdA%3D%3D ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Geomax ZAL 328 သည် မြင်ကွင်းကို Magnification 32x ဆအထိ ချဲ့နိူင်သောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ဧ။် လုပ်ငန်းများတိုင်းတာရာတွင် မြင်ကွင်းကို ပိုမို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖြင့် မြင်နိူင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Leveling Accuracy အနေဖြင့်လည်း 1 km double run ကို 1.5 mm Accuracy သာရှိပါသည်။
The Hand Parllet Tuck is the ideal &quot; storage aid&quot; and &quot; handling partner &quot; for all manual transport tasks over short distances,exce- llently suitable for use on lorries ,in small warehouses and markets ect .
1. Comes withaChinese-branded engine 2. Two forward gears, two reverse gears 3. Hydraulic cylinder available with combination seal for reliable leak-free performance Changlin Construction Machinery (Engineering Vehicle/ construction equipment), High Quality!!
	Go anywhere. Tracks expand from 35.5” (90.2 cm) to 42.5” (108 cm) – so you can take on tight spaces, or expand out for better stability and loading/unloading. 	Drill precisely using the Firestick® drill stem, built to maintain superior drilling fluid flow, even during high-torque drilling. 	Power through with the two-speed rotational gearbox, rated at spindle speeds of 220 rpm (high) and 140 rpm (low), to enhance control and increase backreaming speed. 	Maintenance is easy thanks to the one-piece hinged hood that allows quick access to the engine for easy serviceability. 	Take it with you. The D9x13 features an onboard rod-carrying capacity of 300’ (91.4 m). 	Protects your investment with the Vermeer exclusive limited lifetime warranty on rack and pinion gears. 	See your Vermeer dealer for comprehensive service and genuine Vermeer replacement parts.
လိုသလိုသုံး Drill အကူ
၉၀ ဒီဂရီအထိ စောင်းကာ လှည့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Drill သာမက ဝက်အူလှည့်မှာလည်း အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ မည်သည့်ဒေါင့်မဆို ချိုးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကား၊ အိမ်နဲ. တခြား ပစ္စည်းများစွာရဲ. ဒေါက်ချိုးတွေကို အလွယ်တကူ ဖြုတ်တပ်နိုင်ဖို. လိုသလိုသုံး Drill အကူ လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ ဈေးနှုန်ူး - ၁သောင်း ၅ထောင်ကျပ် 15000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Manual Laser Welding - Performance 6002F
လက်ထိန်းလေဆာဂဟေဆက်ခုံကိုရှာဖွေကြည့်ပါ။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မတိုင်မှီလက်ထိန်းလေဆာဂဟေဆက်ခြင်း ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ယခုအနှစ်(၂၀) ကြာဈေးကွက် ဦးဆောင်မှုရရှိပြီးနောက် အဆိုပါအောင်မြင်မှုရရှိသော နည်းပညာပိုင်းတစ်ချက်ချင်းစီ၏အသေးစိတ်ကိုပြန်လည် သုံးသက်ခဲ့ပါသည်။စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်သည် လက် ထိန်းလေဆာဂဟေဆက်ခြင်းအနုပညာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြန် လည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပြီးအသုံးချမှုများစွာ၏ သွင်ပြင် လက္ခဏာများနှင့်များစွာသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြန် လည်ပြင်ဆင်ခြင်းများဒီဇိုင်းအသစ်၊ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက် ပုံအတွက်ဓာတ်အား(၁၀၀၀)နှင့်ကြိမ်နှုန်းဂဟေဆော်သည့် အချိန်ကိုထူးခြားစွာမြင့်တင်ပေးသည်။